मेरी प्यारी जिबन साथीमा म उही तिम्रो गाउले गोठालो श्रीमानको त्रफबाट माया अनी सम्झनाका कोशेलीहरु यसै पत्र मार्फत तिमी समक्ष्य पुराउदै छु । तिमीलाई त्यहाँ के कस्तो छ आफ्ना शरीरको ख्याल गर्नु । अनी घर तिरको बारेमा पनि के भनु सबै तिमीलाई अबगत नै छ । छोरीले तिम्रै बारेमा सोधी रहन्छिन मेरी मम्मी कहिले आउनु हुन्छ भनेर । प्रिया मलाई माफ गरिदिए । किन कि म बिदेश जानु पर्नेमा तिमीलाई जानु पर्‍यो । बाध्यता नै त्यस्तै परी दियो। मेरो भन्दा तिम्री छिटो भिसा आयो। हुन त तिमी हिंडे पछी मेरो पनि भिसा आएको त थियो । तर ति हाम्री छोरीलाई एक्लै छोडेर म बिदेश आउन सकिन हुन त मामा घर लगेर बिदेश आउन पनि सक्थे तर यो बाबुको मनले मानेन । आज गएको पनि डेड बर्ष भई सक्यो , मैले कती पटक घर फर्किन आग्रह गरी सके तर तिमीले नमान्दा छोरी अनी म चिन्तित छौ । किन तेती निस्ठुरि बन्न पुगेउ । फोन को जबाफ पनि दिदैनौ । सुनी राछु बिदेशको रमझमले तिमीलाई पनि छोइ सक्या रे । बिदेशको हाबाले तिमीलाई पनि भेटायो रे भनेर खबर पाउछु प्यारी सानु कहिले खाएको बिश लाग्छ त कहिले नखाएको बिश पनि लाग्छ एही कुरालाई मनन गरी जती सक्दो छिटो घर आउनु हामी तिम्रै प्रतिक्ष्यामा बसिरेहेका छौ । कती निस्ठुरी बन्न सकेकी । फोन गर्दा पनि गलत नम्बर हो भनेर भन्छ। सात आठ वटा त सिम कार्ड बद्ली सकेछौ किन हो । तिमी सँग सोध्धा हरायो भनेर भन्छेउ । अनी अरु सोधु भन्दा मैले आँफै कमाइकी त हुम् भनेर जबाफ दिन्छेउ ।
प्यारी सानु दुनियाँमा सबै भन्दा ठुलो इज्जत हो । पैसा मात्रै सब थोक होइन । मेरी सानु,, जिन्दगी लामो छ छोरीलाई बिचल्ली किन पार्छेउ । जती खेर सुकै तिम्रै यादमा तड्पी रहेका छौ । घर आउ सँगइ - सँगइ जे जस्तो परे पनि गरौला । पछी पछुताउन नपरोस । समयमै बिचार पुराएर काम गर्ने हो भने घर जाम रामो हुन्छ । अरु जे जसो गर्दै चल्छन तेसै गरी चल्न तिमी हामीलाई मिल्दैन । प्यारी सानु,, सक्दो छिटो घर आउने काम गर्नु । यस्ता कुरा जती लेख्छु उती मेरा आँखाबाट आसु बह्न्छन । ओहो!!!!!!!! धेरै लेखेछु क्यार तिमीलाई पढ्न समय मिल्दैन होला । शायद लेख्दा कुनै कतै तिमीलाई मन नपरेका शब्द हुन सक्छन एदी त्यस्तो भएमा मेरै भलाइको लागि हो भनेर मनमा लिनु । भन्दै पुन जती सक्दो छिटो घर फर्कने अनुरोध गर्छु।
उही तिम्रो श्रीमान अनी छोरी !!!!!!!!!!
स्थान: उही तिमी हाम्रै थाराको कोठि
समय : रातको १० बजे